Ingxoxo noJoy Owango, TCC Africa - AfricArXiv
Kushicilelwe ngu UJo havemann on I-24th February ngo-2020 I-24th February ngo-2020
Umqondisi Omkhulu we-TCC Africa kanye nozakwethu wephrojekthi ye-AfricArXiv UJoy Owango wakhuluma naye Imiphakathi Yezamabhizinisi e-Afrika mayelana nemodeli yayo, izifiso kanye nesimo samanje semfundo ephakeme kanye nocwaningo e-Sub Saharan Africa.
Ishicilelwe ekuqaleni africabusinesscommunities.com/…/
UJoy Owango, Umqondisi ku- I-TCC Africa
The Isikhungo Sokuqeqesha Ezokuxhumana iyinhlangano ezingenzi nzuzo yeminyaka eyi-14 ubudala ngokubambisana nayo IYunivesithi yaseNairobi.
Singabantu a isikhungo sokuqeqesha esekela abacwaningi, izikhungo zocwaningo kanye nohulumeni eSub Sahara Africa ukuthi bangakhiqiza kanjani futhi bathuthukise umphumela wabo wocwaningo nokubonakala kwabo […].
Kunezinhlelo ezifana nezethu ezikhona, kepha zixhaswe ngabanikeli futhi inselelo enkulu ukuthi lapho uxhaso seluphothuliwe iphrojekthi iyawa. Kungakho sikhethe ukungasebenzisi imodeli yoxhaso, kepha indlela yebhizinisi kanye nokuzimela ekuphatheni iSikhungo Sokuqeqesha e-Communcation futhi indaba yethu yempumelelo ukuthi sisekele abacwaningi abangaphezu kuka-3000 kumazinga we (MSc, PhD kanye noProf) ngaphezulu kwama-70 izikhungo zocwaningo emazweni angaphezu kwama-20 eSub Sahara Africa.
I-Laureate of the Invest2Impact Award 2019
Umthombo wesithombe: TCC Africa iwebhusayithi
The Izimali2Impact bekuyinselelo yezwe emihlanu futhi sancintisana nezinkampani ezingama-800 esifundeni eziphuma njengabanqobi abayi-100 abahamba phambili. Lo mklomelo ububheke abesifazane abaphethe izinhlangano ezizinzile esifundeni futhi siphumelele esigabeni seMfundo ePhakeme.
Isimo samanje semfundo ephakeme nocwaningo eKenya nase-Sub Saharan Africa
[…] Ohulumeni bazibophezele ekusebenziseni okungenani iphesenti elilodwa le-GDP yabo kwezemfundo ephakeme nocwaningo. Kuze kube manje amazwe ayi-15 ase-Afrika kubandakanya neKenya asecishe afinyelela kule nhloso futhi asezakhele iMikhandlu Enikeza Isayensi, umsebenzi wayo ukuhlinzeka ngezimali, ukwesekwa kocwaningo emkhakheni wezemfundo ephakeme nocwaningo. Yilapho singena khona njengesikhungo njengoba sisekela imiphakathi yocwaningo kanye neyezemfundo kula mazwe afanele ngokuqeqeshwa nangokubonisana ngezindlela zokwenza ngcono ikhwalithi yemiphumela yocwaningo (amaphepha ezifundo, izethulo) nokwandisa ukubonakala kwabo, ngocwaningo oluhlukahlukene izixazululo zokusekela nedatha yokufinyelela evulekile.
Dala ubambiswano obuningi beGlobal North-South, okuzoholela ekunikezeni idatha evulekile yokuthola ukufinyelela kubaphenyi baseSub Sahara Africa, okwenza inqubo yabo yokutholakala kocwaningo ibe lula nokwenza umsebenzi wabo ubonakale, okuzokwenza ukuthi izifundiswa zithole ulwazi olunganikeza Ukuncintisana nontanga yabo eNyakatho yeGlobal.
Joy Owango, Umqondisi Omkhulu e-TCC Africa
Funda yonke ingxoxo kwi africabusinesscommunities.com/…/
Inhloso ye-TCC Africa ukufaka isandla ekwandeni kwephrofayili, kwasendaweni, nakwamanye amazwe, kwesayensi yase-Afrika, kanye nomthelela wayo empilweni yabantu base-Afrika, ngokwenza ngcono amakhono ezokuxhumana ngezobuchwepheshe ngazo zonke izindlela, ezifundweni nakwezinye izinkundla ezifanele, e-Afrika. | tcc-africa.org/about/
Kuleli sonto uMqondisi wethu @JoyOwango wamenywa e @Ukhozi_fm Umhlangano obanjelwe eDakar, eSenegal.Umhlangano wagxila kuwo #buildingscienceystems ngaphakathi kweMikhandlu Enikeza Isayensi yase-Afrika, engamazwe ayi-15 azibophezele ekusebenziseni iphesenti le-GDP yawo ku-R & D.#Khulisiwe pic.twitter.com/3W4LgwWIBd
- TCC AFRIKA | # TCCat10 (@tccafrica) February 12, 2020
Kwakuyilungelo ukuhlangana ne @Ukhozi_fm ubuholi kule ntambama ukuze babelane ngemininingwane yokuthi bangayithuthukisa kanjani imiphumela yabo yocwaningo kanye nokubonakala ngokubambisana kwethu.
# TCCat10 #Isipiliyoni seMYTCCE pic.twitter.com/gdiIBAghqO
- TCC AFRIKA | # TCCat10 (@tccafrica) February 7, 2020
Ukusebenzisana kwe-TCC Africa <> AfricArXiv
I-TCC Africa ne-KiaArXiv basebenzisana ekwakheni amandla ekubhaleni iSayensi kanye nokushicilela, Ukufinyelela okuvulekile, kanye nokutholwa kocwaningo lwase-Afrika.
Categories:	izimemezeloEzokuxhumana Kwesayensi
Tags: ukwakhiwa kwamakhonoukufinyelela okuvulekileukushicilelaUkubhala KwesayensiI-TCC Africaukuqeqeshwa